कपाल लामो र सिल्कि बनाउन चाहनुहुन्छ, यस्तो छ घरेलु उपाय - नेपाली खोज
कपाल लामो र सिल्कि बनाउन चाहनुहुन्छ, यस्तो छ घरेलु उपाय
काठमाडौं । लामो कपाल नारीको गहना हो । कपालले नारीको सौन्दर्यतालाई थप सुन्दर देखाउँछ । हिजोआजका नारीहरुले कपाल काट्ने तथा रङ्गाएर हिड्ने गरेका छन् । तथापि लामो र सिल्कि कपालको चाहाना राख्ने नारीहरु पनि निक्कै छन् समाजमा । उनीहरु लामो र सिल्कि कपालका लागि निक्कै भौतारिन्छन् । विभिन्न विधिहरु अपनाउछन् । तर, हाम्रो भान्छामा उपलब्ध प्याज पनि हाम्रो लामो र सिल्कि कपालको सहारा बन्न सक्छ भन्ने धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
प्याज कपाल झर्ने र दुई मुखे कपालका लागि उपयोगी हुन्छ । प्याजमा रहेको सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ, जसले कपालको विकासका लागि मद्दत पुग्छ । प्याजमा भएको एन्टी ब्याक्टेरियल गुणका कारण यसको रस कपालमा लगाउनाले झर्ने समस्या हट्छ । यदि तपाईं कपाललाई चमकदार, स्वस्थ र लामो बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्याजको रसबाट बनेको हेयरप्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज हामी प्याजलाई कसरी प्रयोग गर्दा कपालका लागि फलदायि बन्न भन्ने बारेमा चर्चा गरौं…
प्याजको रस :
प्याजको रस निकालेर टाउको छालामा लगाएर २५–३० मिनेट त्यत्तिकै छाडिदिनुहोस् । कपालले सोसोस् भन्नका लागि टाउकोलाई तौलियाले छोप्नुहोस् । त्यसपछि सेम्पोले कपाल राम्ररी धुनुहोस् ।
प्याजका साथ बियर :
बियरले कपाललाई प्राकृतिक रुपमा चमकदार बनाउँछ । प्याजको रसलाई बियरमा मिसाएर लगाउनाले कपाल बढ्नुका साथै यसले कण्डिसनरको पनि काम गर्छ । कपाल लामो बनाउनु छ भने यो उपायलाई सातामा दुईपटक प्रयोग गर्नुहोस् ।
प्याज र नरिवलको तेल :
प्याजका साथ मह :
प्याजका साथ कागती :
प्याज र अण्डाको सेतो भाग :
अण्डा कपालका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । लामो कपाल बनाउन चाहनेहरुका लागि प्याज र अण्डाबाट बनेको हेयरप्याक निकै लाभकारी हुन्छ । यो प्याक बनाउनका लागि प्याजको रसमा अण्डाको सेतो भाग मिसाउनुहोस् । यसलाई आधा घण्टासम्म कपालमा लगाएर शेम्पु लगाएर नुहानुहोस् । प्याजको रसबाट बनेको हेयरप्याकको प्रयोगले सजिलै कपाल लामो र चमकदार बनाउछ । साथै, कपाल झर्ने समस्या पनि कम हुन्छ । तर, याद गर्नुहोस् एकपटकमा एउटा उपाय मात्र प्रयोग गर्नुहोस् ।
कोभिडको खोप लगाएपछि के हुन्छ ?
गुलियो चिज खाँदा किन किराले दाँत खान्छ ?
भारतमा २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संक्रमित फेला
भारतीय काँग्रेसका नेताहरुलाई भाजपामा प्रवेश गर्न केन्द्रीय मन्त्रीको सुझाव